Home / Interior design / Ahoana ny fiovan'ny tohatra miolikolika avy amin'ny famolavolana ka hatrany amin'ny fipetrahana?
2021 / 05 / 27 FisokajianaInterior design 6556 0
Amin'ny alàlan'ny lahatsoratra "Inona no atao hoe tohatra mihodina vy?" Amin'ity lahatsoratra ity dia fantatsika ny toetra, ny karazany ary ny fampiharana ny tohatra mihodina vy.
Androany, hiresaka aminao momba ny fomba nivoahan'ilay vy amin'ny tohatra mihodinkodina avy amin'ireo lafiny telo manaraka aho?
01. Kaonty sy fanamarinana ireo tohatra mihodina
02. Ny dingan-dàlana fanindroany faharoa amin'ny tohatra vy mihodina
03. Fandalinana tranga momba ny fampiharana ny tohatra rotary
Kaonty sy fanamarinana ny tohatra mihodina
Alohan'ny hanombohantsika dia andao manontany fanontaniana amin'ny mpiara-miasa amintsika: ho an'ny tohatra mihodinkodina, aorian'ny famoahana andiana sary fananganana mahay, azontsika atao ve ny mametaka tsara ilay tohatra mihodina eo an-toerana?
Mazava ho azy fa tsia ny valiny. Ao amin'ny sarin'ny tohatra mihodina ihany no mety misy "tsy dia azo antoka", noho izany amin'ny alàlan'ny sary, fa mila famolavolana rafitra matihanina ihany koa mba hikajiana sy hamerenana. Ny antony dia izao manaraka izao.
1, Fiheverana momba ny fiarovana
Voalohany indrindra, mila mahatakatra foto-kevitra iray ianao. Amin'ny famolavolana anatiny, fa ny rehetra tafiditra amin'ny kajikajin'ny enta-mavesatra, ny fanamafisana ny rafitra ary ny olan'ny fanovana ara-drafitra, ny injenieran'ny rafitra dia mila manao kajy sy fanamarinana mifandraika amin'izany.
Amin'ny maha mpamolavola anatiny antsika, dia miasa mafy izahay hamokarana sary ny tohatra mihodinkodina, mba hahafahana mamaly ireo filàna miasa sy kanto ihany. Raha toa ka mahafeno ny fepetra takian'ny fiarovana io dia mbola mila manome ny sary mifandraika amin'izany sy ny fampahalalana momba ny rafitrano ho an'ny singa ara-drafitra amin'ny kaonty isika.
Analysis Fanadihadiana fanisana mifandraika amin'ny rafitra vy
Mandritra ny fizotran'ny kaonty, ny mpamorona endrika dia mety manolotra fanovana amin'ny fotoana rehetra. Ohatra, ny sehatra afovoany dia mila apetraka ho an'ny tohatra mihodinkodina, ny ambany mila mampitombo ny tsanganana, ny fitaovana ampiasaina dia tsy afaka mahafeno ny fepetra takiana ary mila soloina, sns.
Araka ny fanehoan-kevitra, ny mpamorona atitany dia hanao fanovana ny sary mandra-pahatongan'ny sary mifanaraka amin'ny fenitra fananganana.
2, Fepetra takiana
Etsy ambony, fantatsika fa ny tohatra mihodinkodina dia dingana fohy amin'ny fanamafisana ny sary faharoa izay tokony hofenoina raha misy fiaraha-miasa matihanina amin'ny rafitra.
Amin'ny tsena ankehitriny, ny ankamaroan'ny antoko famolavolana anatiny dia matetika tsy manana ny mari-pahaizana handray ny famolavolana ny tohatra mihodina. Ka manoloana an'io toe-javatra io dia matetika izy ireo no mamoaka ny endrika + fananganana tohatra mihodina amin'ireo matihanina hanao ilay asa.
Raiso ho ohatra ny "tohatra vy", andao jerena ny atin'ny fanambarana momba ny firafitra sy ny fananganana tohatra vy mihodina ho an'ny tetikasa.
Fanamarihana kely momba ny famolavolana ny endrika sy ny fananganana tohatra miodina amin'ny firafitra vy ao amin'ny Lobby of XX Hotel
(A) Anaran'ny tetikasa sy atiny.
1 number Laharana fanolorana: xxxx
2, Anaran'ny tetikasa: rafitry ny vy ao amin'ny hotely lobby xxx mihodina mihintsana ny famolavolana sy ny fananganana
3 location Toerana misy ny tetikasa: ny tanàna
4 unit Fitaovana fananganana: xxxx Fampiroboroboana ny varotra distrika vaovao Cultural District.
5 over Topimaso ny tetik'asa: xxxx Hotel lobby vy firafitry ny tohatra mihodina lalindalina kokoa amin'ny famolavolana sy ny fananganana, ao anatin'izany ny famolavolana ny tohatra vy amin'ny tohatra (anisan'izany ny fikajiana enta-mavesatra amam-bika sy ny famolavolana fanamafisana ny rafitra ary ny fanamafisana ny fanamafisana), ny fananganana tohatra vy sy ny haingon-trano tohatra vy , ny tetikasa dia misy ny fanjakan'ny fandravana sy famerenana amin'ny laoniny ary ny raharaha hafa rehetra.
6 estimate Tomban-kevitry ny tetikasa: xx tapitrisa yuan
7 category Sokajy fanaovana tolotra: DB (famolavolana - fananganana) - fananganana sivily
8 division Fisarahana fizarana: Dingana I
(B) Fepetra takiana amin'ny mpifaninana.
1, Fahafaham-bidder: mari-pahaizana matihanina amin'ny firafitry ny vy matihanina fifanarahana matihanina 3 na mihoatra ny mari-pahaizana, ary koa manana ambaratonga firafitry ny firafitra vy B na mihoatra ny mari-pahaizana.
2, mari-pahaizana momba ny tetik'asa tetik'asa: matihanina amin'ny injeniera fanamboarana kilasy roa na ambony mpanao fanoratana voasoratra
3, Fomba fahaizana: post-qualification
Ao amin'ny fanambarana tender etsy ambony, dia azo jerena fa ilaina ny fahaizana mari-pahaizana matihanina amin'ny firafitry ny matihanina kilasy telo na ambony. Mandritra izany fotoana izany, ny mari-pahaizana famolavolana rafitra vy ambony sy ambony dia takiana mba hamokarana ny endrika lalindalina kokoa sy ny fananganana tohatra vy mihodina.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny orinasa mpamorona endrika anatiny dia tsy mahay mamokatra sary toy izany, ary mila olona matihanina bebe kokoa handalina. Ny olona matihanina dia matetika avy amin'ny mpanamboatra tohatra vy.
▲ Mihalalina ny injenieran'ny firafitra
▲ tohatra miolikolika Salvador Dali Museum - sary an-tsary
Ny famolavolana ny tohatra miolikolika dia tsy kisarisary foto-kevitra na fandikana ny eritreritry ny mpamorona atitany. Tsy maintsy mandalo kajy sy fanamboarana injeniera henjana izy io alohan'ny fampiharana azy.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, tompon'andraikitra amin'ny fanaovana ny tohatra ho "tsara tarehy" isika, ary ny firafitry ny firafitra dia tompon'andraikitra amin'ny fanaovana "tohatra" ny tohatra. Ny ambiny dia tompon'andraikitra amin'ny fandoavana ny fametrahana ny tompony.
Rafitra vy mihodina tohatra fanindroany dingana faharoa
Ity manaraka ity dia fampidirana fohy: rehefa mila mamolavola rafitra vy mihodina ianao, ny fizotran'ny docking an'ny famolavolana anatiny sy ny mpanamboatra tohatra.
1 、 Manomàna vaovao
▲ Manomeza fanadihadiana momba ny tranokala sy fampahalalana hafa
Ny mpamorona atitany dia hamaritra ny fampahalalana momba ny famolavolana toa ny fomban'ny tohatra, ny fitaovana ary ny endrika, ary hanome ny mombamomba ny firafitry ny habaka mifandraika amin'izany (ao anatin'izany ny fanadihadiana amin'ny tranokala) ary ny fepetra takiana amin'ny fizotran'ny famokarana ho an'ny mpamokatra. Na ny halalin'ny sary ho an'ny mpanamboatra tohatra ho an'ny mpanamboatra hanatanterahana ny fanamafisana faharoa.
2, Mihalalina ny mpanamboatra
▲ Firafitra haingon-trano tohatra vita amin'ny vy
▲ extrapolation maodely 3D
Amin'ny alàlan'ny mpanamboatra ny tohatra na ny mpamorona firafitra araky ny sary natao am-boalohany hamaritana ny teny nalaina nanao sonia fifanarahana, namoaka ny lalindalina kokoa fanaovana kajy fananganana rafitra, ary avy eo mifandray amin'ny mpamorona hanamafisana ny antsipiriany farany. (Ity dingana ity dia orinasan'ny mpanamboatra, tsy dia misy ifandraisany firy aminay.)
3, famokarana sy fametrahana vokatra vita
▲ Fanamafisana ireo singa amin'ny tohatra
Ireo mpanamboatra tohatra arak'ilay rafitra voamarina farany, asio santionany ary alamino ny famokarana modely atrikasa. Fanaraha-maso sy fanekena ny orinasa aorian'ny fandefasana lozisialy ny fametrahana ny tranokala.
▲ Toerana fananganana tohatra vy
Satria tsy mitovy amin'ny fananganana haingon-trano hafa ny fananganana tohatra vy vita amin'ny vy, ny tranokala dia manana fenitra ambonimbony kokoa amin'ny fisafidianana fitaovana ho an'ny firafitry ny vy, ny fizotry ny welding ary ny fitsaboana hosodoko ambonimbony.
▲ Manao dian-tohatra sy vita vita amin'ny bala
4, fanekena vokatra vita
▲ tohatra mihodina vy miorina amin'ny tena fijery
Rehefa vita ny fametrahana dia nihemotra ilay mpanamboatra tohatra. Aorian'ny faneken'ny mpanara-maso sy ny famolavolana dia ampidiro ny fanadiovana sy ny fandefasana endrika farany.
Fampahatsiahivana manokana: olana mahazatra mahazatra amin'ny famolavolana tohatra mihodina
a, Ny zoron'ny tohatra mihodina dia kely loatra, mitarika lesoka amin'ny famolavolana
Ity olana ity dia ilay mpamorona endrika mahazatra indrindra mampitombo ny tsy fisian'ny fiheverana. Ireo injenieran'ny firafitra dia tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny fiarovana ny enta-mavesatra fotsiny, saingy tsy nihevitra ny tena fampiasana, ka nahatonga ny fananganana farany ny fipetrahana dia tsy mahavita ny olan'ny kalitao.
Noho izany, azafady mba alao antoka fa mahatadidy an'ity famaritana ity ianao: "ny tohatra miolikolika avy eo afovoan'ny lalantsara anatiny 250mm dia tsy tokony <220mm".
b, ny fizotran'ny fananganana tohatra vy vita amin'ny vy tohatra dia niova tanteraka tamin'ny haben'ny famolavolana, ka niafara tamin'ny fanitsiana ireo sary nataona, nisy fiatraikany tamin'ny endrika.
Sary: Araka ny aseho etsy ambony, dia somary sarotra ny firafitra miolakolaka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny misy kintana dimy. Satria ny taolam-by vita amin'ny vy miorina eo amin'ny tohatra tohatra dia voafantina avy amin'ireo mpanao fananganana tsy matihanina mandritra ny fametrahana azy, ny fefy vy miorina amin'ny tohatra dia nihataka tamin'ny haben'ny famolavolana mihoatra ny 300mm. Ireo dia nanampy fahasahiranana tamin'ny asa famoahana tranonkala.
Ho valin'ity toe-javatra ity, ny mpamorona ihany no tsy maintsy nandinika ny haben'ny tranokala araka ny haben'ny sary. Fantaro avy eo ny fahasamihafana misy eo amin'izy roa ary ny fanamboarana indray mba hampihenana ny lesoka araka izay azo atao.
Tetikasa tohatra mihodina
Manaraka, jereo ireo tranga hafa amin'ny fihanaky ny tohatra miolikolika ataon'ny mpamorona sy mpanamboatra.
1 、 Voninkazo fitiavana hotely fitaratra misy tohatra
▲ Toerana fametrahana
▲ Fitsaboana anti-slip amin'ny fitaratra
Ity tohatra tohatra fitaratra ity no "tohatra fitaratra tsy misy tohana rehetra" voalohany izay novolavolaina sy namboarinay tany Chine. Naharitra 15 andro ny famokarana sy ny fametrahana azy.
Vita amin'ny vera rehetra izy io, miaraka amin'ny vera avo lenta 65. Mampiasà vera fitahirizana laminated telo sosona avokoa izy rehetra, miaraka amin'ny hatevin'ny vera mihoatra ny 35mm. Ny rohy fitaratra sy fitaratra dia vita tamin'ny faritra namboarina sus304.
2 hall Hunan Shaoyang Xiangjiao trano fampirantiana divay
Ny tohatra boribory vita amin'ny vy, ny fototra iorenan'ny fametahana takelaka vy avo lenta miolikolika. Ny lalantsara ivelany dia mampiasa vera voaforona miolakolaka amin'ny fantsom-by vy 304. Ny andry vy ivelany dia voaravaka volo vita amin'ny hazo walnut mainty, ary ny tohatra tohatra manontolo dia manaraka ny fironan'ny takelaka vy miolakolaka ary miakatra.
3, tohatra ivelany
4, tohatra mihodina ao anaty trano
Ankehitriny, fantatry ny mpiara-miombon'antoka: te-hanao sarina sary fananganana mahay amin'ny tohatra mihodinkodina, ankoatry ny fandikana sy ny fahazoana ny hevitry ny famolavolana, ny tena zava-dehibe dia ny fahatakarana lalina sy ny fampiharana ireo fenitra nasionaly.
Mandritra izany fotoana izany, dia tokony hahita rafitra matanjaka sy mpanamboatra fananganana azo antoka ihany koa. Raha tsy izany dia ho lasa sarotra ireo hevitra famolavolana tsara, raha mbola ny tena te-ho tafita soa aman-tsara.
Ary farany, andao hofintinina.
Previous :: Mahita ny The Mountain Tea Lodge, Toerana Zen misy rano, vato ary hazo maniry voajanahary | Drafitra ONE-CU Next: Inona ny tohatra mihodina vy?